जो आफैं खुर्सानीको धुलो छर्केर लुटिएको बहाना गर्दै रातमा रुँदै चौकी गए… – AB Sansar
January 12, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on जो आफैं खुर्सानीको धुलो छर्केर लुटिएको बहाना गर्दै रातमा रुँदै चौकी गए…
पुस २६ गते राति करिब साढे ९ बजे। रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. ६ का २५ वर्षीय हुकुम पुन मगर जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही पुगे।
उनी त्यहाँ एक्लै र पैदल गएका थिए।
प्रहरी कार्यालयमा पुगेर मगरले आफूलाई अपरिचित व्यक्तिले खुर्सानीको धूलो आँखामा छर्केर घोराही बजारको शहिद गेट नजिकैबाट ४ लाख ३६ हजार रूपैंया लुटेर लगेको भन्दै सहयोगको लागि याचना गरे।
मगर आँखा मिच्दै र आँशु पुछ्दै प्रहरी कार्यालय भित्र प्रवेश गरेका थिए। उनको कपडा र अनुहारमा परेको खुर्सानीको धुलो सहजै देखिन्थ्यो।
लगतै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल रूमबाट प्रहरी निरीक्षक मोहनजंग बुढाथापालाई फोन आयो। मगरको अवस्था र भनाईहरु फेहरिस्त वर्णन गर्दै कन्ट्रोलरूमले उनलाई कार्यालयमा आउन आग्रह गर्‍यो।
आइतबार उनकै डिउटी थियो। यो कुरा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दसम्म पुग्यो। चन्दले तत्कालै घटनाको राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले लुटिएका युवकलाई गाडीमा राखेर घटनास्थल ल्याउन अह्राए। आफू मोटरसाईकलबाट त्यहीँ पुगे। शहिद गेट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करिब ७ सय मिटर उत्तरस्थित मुख्य बजारमा पर्छ।
मुख्य बजार र चोक भएकाले शहिद गेटमा २४सैं घन्टा प्रहरी तैनाथ हुन्छ।
यस्तो ठाउँमा कसरी लुटपाट भयो? भनेर प्रहरी निरीक्षक बुढाथापा आश्चर्यमा परे।
प्रहरी निरीक्षक बुढाथापा शहिद गेट पुग्दा त्यहाँ केही प्रहरी ड्यूटीमै थिए। उनले त्यहाँका प्रहरीलाई सोधपुछ गरे। त्यहाँ कसैले पनि लुटपाट भएको वा कुनै कसैमाथि हातपात थाहा नभएको जानकारी गराए।
पीडित भनिएका हुकुम पुन मगरलाई प्रहरी निरक्षीकले कहाँ नेर हो? भनेर देखाउन लगाए। मगरले शहिद गेटभन्दा केही उत्तरतर्फ आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै घटनास्थल देखाए।
त्यहाँ नजिकै एउटा होटेल खुल्लै थियो। त्यो होटेल सञ्चालक र आसपासका मानिसलाई प्रहरी निरीक्षक बुढाथापा आफैंले सोधपुछ गरे। कसैले पनि कुनै प्रकारको सुराक दिएनन्। सबैले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।
अनि फेरि आशंकाको नजरले थापाले पुलुक्क मगरतर्फ नजर डुलाए। टर्च लाइटको उज्यालोमा मगरको अनुहार निर्दोश देखिन्थ्यो।
‘सिधासाधा र भर्खरै पहाडबाट झरेको जस्तै निर्दोश चेहरा देखिन्थ्यो,’ प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले भने, ‘त्यतिबेला मैले सोचेँ, विचरा रोल्पाबाट आजै झरेको रहेछन्, पैंसा बोकेको चाल पाएर बजारका लोफ्फर केटाहरुले लुटेछन्।’
शहिदगेट आसपासमा सोधपुछ गर्दा कुनै सुराक फेला नपरेपछि मगरलाई पुनः आफैंसँग गाडीमा प्रहरी निरीक्षक कार्यालय फर्किए।
कार्यालय पुगेर प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले उनलाई शान्त्वना दिन थाले। शहिदगेटमा सिसी टिभीसमेत रहेकाले सोमबार बिहानै त्यसको फुटेज हेरर चोर पत्ता लगाउने र पैंसा फेला पर्नेभन्दै विश्वास दिलाए।
तर, सिसी टिभीको कुरा निकाल्नासाथ मगरको अनुहार एकाएक परिवर्तन भयो। त्यसपछि प्रहरी निरीक्षक बुढाथापामा आशंका उब्जियो। अनि उनले मगरमाथि थप सोधपुछ गर्ने मनासय बनाए।
‘मैले उहाँलाई त्यत्रो पैंसा कहाँबाट ल्याएको भनेर सोधेँ। तर उहाँ बोल्नुभएन,’ प्रहरी निरिक्षक बुढाथापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘फेरि मैले ती लुटेरा कति जना र कस्ता थिए भनेर सोधेँ, त्यो जवाफ पनि उहाँले दिन सक्नुभएन।’
प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले त्यत्रो रकम लुटिएपछि मगर चिन्ता र पीडामा परेको हुनसक्ने लख काट्दै पुनः सोधे।
‘के त्यो रकम तपाईँले बैंकबाट झिक्नुभएको हो? वा अरू कुनै व्यक्तिबाट ल्याउनुभएको हो भनेर पनि सोधेँ तर, उहाँ बोल्दै बोल्नु भएन,’ प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले भने,‘त्यसपछि उहाँले मैले प्रश्न गर्दा नजर जुधाउन सक्नुभएन। टाउको निहुराएर बस्नुभयो। त्यसपछि मलाई थप शंका लाग्यो।’
यो सबै सोधपुछ गर्दा लुटिएका भनिएका मगर र प्रहरी निरीक्षक बुढाथापा मात्र कोठामा थिए।
मगगरको व्यवहार देखेर प्रहरी निरीक्षक बुढाथापा अलि कडा बनेर बोले। त्यसपछि मगरले साँचो बोल्न थाले।
मगरले घोराही बजारकै एक होटेलबाट ५० रूपैंयामा खुर्सानीको धुलो किनेका रहेछन्। त्यो सबै नाटक ऋण स्वरूप ल्याएको रकम तिर्न नपरोस् भनेर आफूले यस्तो नाटक गरेको मगरले प्रहरी निरीक्षकसमक्ष खुलासा गरे।
‘रोल्पाकै फगामका हरि पुनलाई मगरले चार लाख नतिर्ने मनासयले त्यस्तो नाटक मञ्चन गरेका रहेछन्’, प्रहरी निरीक्षक बुढाथापाले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार र लुगा मात्रै हेरेर तत्काल विश्वास गरिहाल्नु गलत रहेछ। राति प्रहरीमा आफैं रुँदै आएर बनावटी कुरा गरेर रकम तिर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छीन प्रहरीलाई उल्लु बनाउन खोजेको देख्दा म दंग परेँ।’
स्थानीय ठेकेदार पुनलाई पैंसा नतिर्न र तिर्नु परे पनि केही ढिला गरि तिर्नु परोस् भन्ने गलत सोच पालेर मगरले आफैं खुर्सानीको धुलो किनेर आफैंले आफैंलाई त्यो छर्किएर प्रहरीमा पुगेको कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले जानकारी दिए।
‘अर्कालाई फसाउन गरिने षडयन्त्रमा मानिस आफैं फस्छ भन्ने यो एउटा सानो तर, राम्रो उदाहरण हो,’ चन्दले भने, ‘गलत सूचना गरि झुठो अपवाफ फैलाउन खोज्ने मगरविरूद्ध शान्ति विरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएर आवश्यक कारवाही हुनेछ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मगरलाई सार्वजनिक गरेको हो।
प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट !!